Digital pump special 002 - MM Online Shopping
africa related gifts gifty scrabble word margaritas waltham coupons rainforest cafe coupons orlando
Digital pump special 002
အမျိုးသား အင်္ဂါသေးငယ်ပြီး စိတ်တိုင်းမကျ ဖြစ်နေသောအကို​တွေအတွက် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး လုံးဝမရှိဘဲ တစ်​ရက်​ကို ၃ဝမိနစ်​​လောက်​အချိန်​​ပေးရုံနဲ့(စစချင်း ၁ဝမိနစ်ကနေစပါ ပြီးမှတဖြည်းဖြည်း တိုးပါ ) သဘာဝ အတိုင်း ကြီးရှည် တုတ်ခိုင်လာမည့် auto ပန်​့​လေး နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ပုံမှန်​​ပြောင်​း​တွေလို လက်​နဲ့ ညှစ်​​ပေး​နေစရာမလိုပဲ ခလုပ်​ ​လေးနှိပ်​လိုက်​ရုံနဲ့ အလိုအ​လျှောက်​ လိင်​တန်​ကိုကြီးထွား​အောင်​ ဆွဲ​​ပေးမဲ့ ​ပြောင်​း​လေးပါ တစ်​စစီဖြုတ်​ပီး​ဆေး​ကြောလို့ရတာမို့ သန်​့ရှင်​း​ရေးအတွက်​ လည်​းအဆင်​​ပြေပါတယ်​
အားသာချက်မျ ား #ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလုံးဝမရှိခြင်း
#တစ်​ရက်​ ကို ၃ဝမိနစ်​​လောက်​​လေ့ကျင်​့​ပေးရုံနဲ့ ၁ပတ်​အတွင်​းသိသာလာခြင်​း #လိင်အင်္ဂါသွေး လေ လည်ပတ်မှု မှန်ကန်ပြီး လိင်ဆက်ဆံချိန်ကြာမြင့်အောင် ပိုမိုစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း။
# နူးညံ့တဲ့စီလီကွန်​ဝါ ရှာ၁ခုအပိုပါပီး ပျက်​စီးသွားပါက အလွယ်​ တကူ Spare ဝယ်​လို့ရပါတယ်
​ #နူးညံ့တဲ့ စီလီကွန်​ဝါရှာအသားကို အသုံးပြုထားလို့ ​ပြောင်​းဆွဲရင်​ နာကျင်​မှုမရှိခြင်​း
#သုံးရလွယ်​ကူပီးအလွယ်​တကူအလွယ်​တကူ ဖြုတ်​တပ်​ ​ဆေး​ကြော၍ရတာမို့ ကျမ်​းမာ​ရေးအတွက်​လည်​းစိတ်​ချရပါတယ်​
လိင်တန်အစွပ်ကို ပြောင်းရဲ့ အောက်ခြေမှာတပ်ပေးပါ ..
ထိုနောက် လိင်တန်ကို ပြောင်းထဲထည့်ပေးပါ ..
စက်ရပ်သွားပါက valve ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ .ပြီးမှာ လိင်တန်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပါ .
အကယ်၍ သင့်အနေနဲ့ တုန်ခါနူန်းက အရမ်းမြန်တယ် သိပ်မထိဘူးလို့ခံစားရပါက ..
စီလီကွန်အစွပ်လေလုံမလုံစစ်ပါ ၊ စုပ်ခွက်ကို ဆီးခုံကို ကပ်အောင်ထားပါ
ဒါမှမဟုတ် M + ခလုပ်ကို နှိပ်ပြီး လိုချင်တဲ့ အနေအထားရောက်သည်အထိ တိုးမြှင့်ပေးပါ .
အသံ တိုးတိုးလေးပဲထွက်ပါတယ် ..
Lithium battery ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်
m+ ခလုပ်ကို ပထမဆုံးစနှိပ်ပါက တုန်ခါနုန်းနည်းနည်းဖြင့်စလာပါလိမ့်မယ် .ထိုအချိန်မှာပဲ အပြာရောင် အလင်းရဲ့ ဘယ်ဘက်က အသားရောင်အလင်းပုံစံပြောင်းသွားပါမယ် ထိုနောက် M + ကိုနှိပ်ပြီး တုန်ခါနူန်းကို တဖြည်းဖြည်းမြှင့်သွားနိုင်ပါတယ် .
M – ခလုပ်ကတော့ တုန်ခါနူန်းကို တဖြည်းဖြည်းလျှော့သွားတာဖြစ်ပါတယ်
ရပ်လို့ပါက M – ကိုတဖြည်းဖြည်းနှိပ်သွားပေးပါ
တုန်ခါနူန်းရပ်သွားချိန်တွင် valve ခလုပ်ကို နှိပ်ပြီး လေထုတ်ပေးပါ
လေ့ကျင့်နေစဉ်အတောအတွင်း အဆင်မပြေခြင်း၊နာကျင်ခြင်းများရှိလို့ရပ်လို့ပါက M – ခလုပ်ကို နှိပ်ပြီး motor ရပ်အောင်ပြုလုပ်ပါ သို့မဟုတ် ကြာကြာဖိထားလို့လည်းရပါတယ် valve ခလုပ်ကတော့ ပြောင်းထဲမှာရှိတဲ့လေကိုထုတ်ပြီး သက်တောင့်သက်သာဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် .
မှတ်ချက် ဒီပစည်းသည်၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးသား အရွယ်ရောက်သော အမျိုးသားများသာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ် .. အကယ်၍ မိမိအနေနဲ့ လိင်တန်တွင် ပြဿနာ တစုံတရာ ရှိနေပါက အသုံးမပြုမီတွင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ် ။လျှပ်စစ် ပစည်းများကို စတင်အသုံးပြုရာတွင် low speed ဖြင့်တာ စတင်သင့်ပါတယ် .နောက်မှာသာ မိမိတို့ရဲ့ ခံနိုင်ရည်အပေါ်မူတည်ပြီး တဖြည်းဖြည်း တိုးမြှင့်လာသင့်ပါတယ် sexual organ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းမှာ ရှောင်ရှားရန်အတွက် ကွန်ဒုံးတပ်ဆင်ပြီးမှာ လေ့ကျင့်ပေးပါ
လေ့ကျင့်ပြီးတိုင်း ပြောင်းကို သန့်ရှင်းရေးပြန်လုပ်ပေးပါ..
Digital pump special 002 quantity
Be the first to review “Digital pump special 002” Cancel reply
Digital Pump Special
Ks32,000.00 Add to cart
Size doctor (ကြီးရှည်လေ့ကျင့်ကရိယာ)
Ks80,000.00 Ks75,000.00 Add to cart